ပြစ်မှုမြောက်သောလုပ်ရပ် – ဦးနှောက်မှ စေခိုင်း ညွှန်ကြားခြင်းလား? – မပမရ ပြစ်မှုမြောက်သောလုပ်ရပ် – ဦးနှောက်မှ စေခိုင်း ညွှန်ကြားခြင်းလား? – မပမရ
ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းတွင် ရာဇ၀တ်မှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်း ဦးနှောက်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့က အဲ့တာကို ထိန်းချုပ်သလား (သို့) အဲ့တာက ကျွန်တော်တို့ကို ထိန်းချုပ်သလား။ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ ဦးနှောက်ထဲမှာကော ပုံမှန်မဟုတ်တာကော ရှိနိုင်သလား။
အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များက စိတ်‌ဝေဒနာရှင်များ၏ ဦးနှောက်သည် ပုံစံတစ်မျိုးရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ စာနာမှု၊ အပြစ်ရှိသည် (သို့) နောင်တရခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် သူတို့၏ ဦးနှောက်ဒေသများသည် ပုံမှန်ထက် သိသိသာသာသေးငယ်သည်။ ဦးနှောက်ဒေသများအကြားမှ ပိုမိုပါးလွှာသော ဆက်သွယ်မှုသည်လည်း အရေးကြီးသည်။ တစ်ရှူးသိသိသာသာသေးငယ်ခြင်း ကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်များ ယူဆကြသည့် ဤဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းပြဿနာသည် ဦးတည်မှုနှင့် ခံစားချက်များကို သိသိသာသာအားနည်းစေသည်။ ထိုသူများအား ပုံမှန်အားဖြင့် ပြင်းထန်သော စိတ်ခံစားမှု (သို့) ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုကို နှိုးဆွပေးသည့် ရုပ်ပုံများကို ပြပါက သက်ဆိုင်ရာ ဦးနှောက်ဒေသများတွင် တုံ့ပြန်မှု မရှိပါ။
ထို့ကြောင့်ရာဇ၀တ်သားများ၏ ဦးနှောက်အတွင်း၌ သူတို့၏လုပ်ရပ်များကိုမကြာခဏအသင့်အနေအထားဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသည်ဆိုသော အချက်များရှိသည်။ ယခုမေးခွန်းမှာ အပြစ်တရား၏မေးခွန်းကို တရားစီရင်ရေးစနစ်က မည်သို့မည်ပုံ တုံ့ပြန်ပုံဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ် မည်သူကမှ သူတို့ရဲ့အပြစ်ကို သူတို့၏ဦးနှောက်ထဲကနေရွှေ့ပြီး သူတို့အပြစ်ကို မရှောင်ရှားနိုင်ပါ။ ခံယူချက်အပြီး ထိုသူတွေကို မည်သို့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အကျဥ်းထောင်အတွင်း၌ လိုချင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလား (သို့မဟုတ်) ဤအပြုအမူပုံစံများကို ချိုးဖျက်ရန် အခြားကုထုံးတစ်ခုခုလိုအပ်ပါသလား။
ဦးနှောက်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဦးနှောက်ပြင်ဘက်ဒေသများရှိ အကျိတ်သည်လည်း အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စပြဿနာများတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါ၀င်နိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဥပမာတစ်ခုတွင် လူနာသည် အလွန်ထူးဆန်းစွာ ပြုမူပြီး တရားမ၀င်သော၊ ထူးဆန်းသော အပြုအမူတစ်ခုကို ပြုမူခဲ့သည်။ သူသည် စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုရေးသားရန်နှင့် ပုံကြမ်းတစ်ခုကို ရေးဆွဲနိုင်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ အကျိတ်ဖယ်ရှားပြီးနောက် သူ၏ အပြုအမူသည် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုများ ပြန်လာပြီး သူသည် လူဟောင်းဖြစ်ပြန်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်များသည် တရားစီရင်ရေးစနစ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများစွာနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အပြုအမှုကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ကြောင်း အငြင်းပွားဖွယ်ရာများရှိနေနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး အခြားကောက်ချက်များ ချနိုင်ပါသည်။
ဇီ၀ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှ ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များကို နားလည်ရန်
အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုမေးပြီး ရာဇ၀တ်သားများကို အနီးကပ်စစ်ဆေးကြည့်ပါ
ခန့်မှန်း (၇၅) မိနစ်ခန့်